နေအိမ် > COVID-19 အချက်အချာ > အထောက်အပံ့နှင့်အရင်းအမြစ်များ
သင့်အားကူညီရန် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုရှာဖွေရန်အောက်ဖော်ပြပါ ၀ န်ဆောင်မှုကိုနှိပ်ပါ။
အပြာရောင်အပြင် တစ် ဦး လမ်းပြထုတ်လုပ်ခဲ့သည် အဆိုပါ Coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေး။ The အပြာရောင်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုအပြင် ဖုန်းနှင့် webchat မှရေတိုအကြံပေးခြင်းနှင့်ရည်ညွှန်းချက်များကမ်းလှမ်းသည် 1300 22 4636.
ဖုန်း 13 11 14 (24/7)
စာသား 0477 13 11 14 (ညနေ ၆း၀၀ - ၇ ည)
အွန်လိုင်းချက်တင် (ည ၇ နာရီမှသန်းခေါင်ယံ ၇ ည)
1800RESPECT သည် COVID-19 အတွင်းလည်ပတ်နေပြီးစာရင်းကိုဒီမှာနှိပ်ပါ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတွေ့နိုင်တဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်လုံခြုံရေးအက်ပ်များ။
Safe Steps ၂၄/၇ မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုပCိပက္ခတုံ့ပြန်မှု
ဤဖုန်းလိုင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်လည်ပတ်သွားမည် 1800 015 188.
DVRCV နှင့် DVVic
COVID-19 နှင့်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုအပေါ်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအတွက်သတင်းအချက်အလက်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုစုစည်းထားသည် Lookout ဝက်ဘ်ဆိုက်.
inTouch (မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးယဉ်ကျေးမှုစင်တာ) ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် COVID-19 သတင်းအချက်အလက်အချက်အချာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ဒုက္ခသည်အသိုင်းအဝိုင်းများမှမိသားစုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်လေ့ကျင့်သူများအတွက်
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသြစတြေးလျ Coronavirus အရင်းအမြစ်များ
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသြစတြေးလျ ၎င်းတို့တွင်ဆေးဝါးများ၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ ဝဘ်ဆိုက်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါပညာရှင်နှင့် 1800 278 462) တွင်လည်းစကားပြောနိုင်သည် ဖုန်းခေါ်ပါ.
$500 သန်းဗစ်တိုးရီးယားလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပဏာမခြေလှမ်းသည် coronavirus (COVID-19) ၏စီးပွါးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့များအပါအ ၀ င်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်များကိုကူညီရန်အလုပ်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေသည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီသောအလုပ်သမားများသည်သူတို့၏စွမ်းရည်များကိုအခန်းကဏ္ new သစ်များတွင်အသုံးချနိုင်သည် (သို့) သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခန်းကဏ္ for များအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအခွင့်အလမ်းများယူနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အလုပ်သမားများအားရှာဖွေနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်ရှင်များသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် ၀ န်ထမ်းများကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဗစ်တိုးရီးယားအစိုးရအတွက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အစိုးရ၏ $1.7 ဘီလီယံစီးပွားရေးရှင်သန်မှုအထုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများအားကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ကူးစက်ရောဂါကိုဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်၏တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြုမည့်အခွင့်အလမ်းသစ်များနှင့်အလုပ်သမားများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အစိုးရသည် Sidekicker နှင့်ပူးပေါင်းပြီးအလုပ်လျှောက်ထားသူများနှင့်သူတို့၏အရည်အချင်းနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ကိုက်ညီသောအလုပ်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လုပ်ဆောင်သည်။
ဤ COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းဘဏ္difficultyာရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသောအိမ်ငှားများအား၎င်းတို့အား Good Shepherd ၏ဘဏ္adviceာရေးအကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်သည်ကိုသတိပေးသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးလျှို့ဝှက်ပါသည် ငါတို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူများကို ဦး စားပေးခွင့်ပြုသည်။
Microfinance 'Good Money' ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ငှားများအား ဦး စားပေးပြီးဘဏ္adviceာရေးအကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့ရယူနိုင်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အခမဲ့၊ လွတ်လပ်ပြီးလျှို့ဝှက်ဖြစ်သည်။
အထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပါတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်လူများသည် coronavirus hotline သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည် 1800 675 398 သို့မဟုတ်သွားရောက်ကြည့်ရှု ဒီမှာ website ။ ခေါ်ပါ 1800 675 395 ရွေးစရာ3ကိုနှိပ်ပါ။
DHHS ဝက်ဘ်ဆိုက် - Coronavirus
Coronavirus နေစဉ်အတွင်းအိမ်မှာတည်းခို - လွယ်ကူသောအင်္ဂလိပ်
သင်၌ Coronavirus ရောဂါ (COVID-19) ရှိနိုင်သည်ဟုသံသယရှိပါကအထူးဆက်သွယ်ထားသော hotline သို့ ၂၄ နာရီ၊ ၇ ရက်ဖွင့်ပါ။
စူပါမားကက်အတော်များများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ဆရာဝန်များနှင့်သူနာပြုများအပါအ ၀ င်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများအတွက်အထူးစျေး ၀ ယ်ချိန်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Woolworths, Coles, Aldi နှင့် Metcash များအတွက်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်မှတဆင့်နှိပ်ပါ။
မေလ 2022 ခုနှစ် သတင်းများကို ချိတ်ဆက်ပါ။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် HHS Connect Newsletter ကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့သည့်အပြင် SMS ဖြင့် ပေးပို့လျက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ချိတ်ဆက်လိုပြီး သင်နှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အီးမေးလ်နှင့် SMS ဖြင့်ပေးပို့သော သတင်းလွှာနှင့် တူညီသည်။
Haven Home Safe (HHS) သည် မြေကွက်သုံးကွက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရပ်ရွာလူထုပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ထောက်ခံရန် Geelong ကောင်စီမှ မနေ့ညက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ 2021 ခုနှစ် သတင်းများကို ချိတ်ဆက်ပါ။
Connect News ၏ ဒီဇင်ဘာ ထုတ်ဝေမှုမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ!